ICairo Dock 3 iyatholakala! | Kusuka kuLinux
ICairo Dock 3 iyatholakala!
ICairo Dock 3.0 Kuyinto a isiqalisi sohlelo lokusebenza upopayiwe Linux esebenza ngaphansi kwe-GNOME, KDE noma i-XFCE.
ICairo Dock 3.0 ibhalwe kabusha kusetshenziswa i-GTK3, izuza isikhombimsebenzisi esibukeka kakhulu nokuhlanganiswa okukhulu neGnome-Shell, yize ibuye ihlangane ngokuphelele kubumbano, esimweni soBuntu. Ibha yomsebenzi manje isikhudlwana ngandlela thile futhi nombhalo usuthuthukisiwe, ukungezwa kwezinye izinhlelo zokusebenza nezinqamuleli eziningana zekhibhodi kungeziwe, okuvumela ukuthi ukwazi ukumisa kalula ukufinyelela kumathuluzi wethu owathandayo.
Enye into entsha ukuthi ifaka umphathi weseshini, lapho singashintsha khona abasebenzisi. Lolu uhlu oluphelele lwezindaba nokuthuthuka:
Ikuvumela ukuthi ukhubaze i-OpenGl uma i-chip chip yethu ingakusekeli ukushesha kwe-3D.
Izinhlobo ze-Gnome-Shell and Unity, ezikhethwa esikrinini sasekhaya.
Ukuqoshwa kwerekhodi le-applet kubhalwe kabusha, manje kuvumela abasebenzisi ukuthi bashintshe.
Izikhiye zesinqamuleli zengezwe kuma-applet ahlukahlukene.
Isiqalisi singenziwa sisebenze ngokucindezela i-ShortKey + inombolo yaso.
Imenyu yomsindo Ubuntu ihlanganiswe ne-applet.
Ivumela ukuchofoza okukodwa "i-tweeting".
I-applet entsha yokuvimbela isilondolozi sesikrini.
Abahlukanisi manje sebesobala.
Izengezo ku-DBus API.
Ukudwetshwa kombhalo (ngokwesibonelo, kuwashi) kuthuthukisiwe.
Izithonjana zomsebenzisi nezindikimba manje zilayishwe ngosayizi ofanele.
Itimu entsha ezenzakalelayo enephaneli ifakiwe kwiphakheji eyisisekelo.
Okunye ukuthuthuka okuningi nokulungiswa kwamaphutha.
Engxenyeni ye-cairo dock 3.0, kufakwe iseshini entsha ekuvumela ukuthi usebenzise i-cairo dock 3.0 ngobunye bephaneli ephezulu ye-2D:
I-GLX-Dock, iyatholakala ukuthi ifakwe ekufakweni okuyinhloko kwe-Linux. Yize namuhla ivuselelwe i-Ubuntu kuphela, ngeke kuthathe isikhathi eside ukuthi itholakale kuwo wonke amanye ama-distros.
Kubasebenzisi be-Ubuntu abangakayifaki okwamanje, kufanele bathayiphe okulandelayo kusuka ku-terminal:
i-sudo engeza-apt-repository ppa: iqembu le-cairo-dock
sudo apt-get ukufaka i-cairo-dock cairo-dock-plug-ins
Ekhasini leCairo Dock 3.0 kukhona umhlahlandlela wokufaka ophelele kakhulu wokusatshalaliswa okusele.
Umthombo: I-Linux Noveles
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » ICairo Dock 3 iyatholakala!
Okwe-Arch kuyatholakala 😉
Kimi, itheku elihle kunazo zonke elikhona nge-linux, akunakwenzeka ukuthi ungabi nalo selokhu ngizamile, kuphelele kakhulu;))
Wenza kanjani ukuthi ibha ephezulu ibukeke kanjena, ingabe ubuntu, akunjalo?
Uhlelo oluhle kakhulu, ngiyabonga kakhulu.
Wamukelekile! Yeka ukuthi kukusebenzele kanjani!
Kuhle kakhulu, kepha ngithola ibha emnyama eduze kwebha ejwayelekile, engathandeki futhi engasebenzi noma yimuphi umsebenzi. Ngabe ukhona owaziyo ukususa isikhala esimnyama esishiwoyo? Ukhona omunye umuntu owenzekile?
Njengoba iLinux izoshintsha ukusingathwa maduzane
IGloobus - i-Quicklook (OSX) ehlukile kwiLinux